I-Huawei Band 3 Pro kunye ne-Band 3e ngoku ziyathengiswa eMelika | I-Androidsis
I-Huawei's Band 3 Pro kunye ne-3e ye-Smart Wristbands ngoku iyafumaneka e-United States
UAron Rivas | | Huawei
IHuawei, emva kokufikelela kwisigqibo sokungathengisi ngokusesikweni uthotho olutsha Umlingani 20 kuba ezinye izikrokro kunye nokuphazamiseka, utyikityo Sele ineBand 3 Pro kunye neBand 3e ezithengiswayo elizweni.
Okulandelayo, sikunika zonke iinkcukacha zefayile ye- iimpawu, amaxabiso kunye nokufumaneka kwala maqela.
1 I-Huawei Band 3 Pro
2 IHuawei Band 3e
3 Ixabiso kunye nokufumaneka kwazo zombini iisongo eMelika
I-Huawei Band 3 Pro
I-Huawei Band 3 Pro iza nomzimba wensimbi owenziwe nge-ergonomically kunye nomtya werabha wesilicone. Inomxholo we-0.95-intshi ye-AMOLED yesikrini sokuthinta kunye nenqanaba le-ATM engama-50 enikezela ukuya kwiimitha ezingama-50 zokumelana namanzi.
Isixhobo Ixhotywe ngebhetri eyi-100 mAh, ekuthiwa inikezela ukuya kuthi ga kwiiyure ezisixhenxe zokusetyenziswa kunye nokulandela umkhondo kweGPS kuvuliwe. Enkosi ngenkqubo yokujonga intliziyo ye-AI kunye neTruSeen 3.0, ibonelela ngokufunda ngokuchanekileyo kwenqanaba lentliziyo. Eminye imisebenzi ibandakanya ukubeka esweni ubuthongo, ukulandelela umkhondo, ukulandelela ezemidlalo, kunye noqeqesho.
Nje ukuba idityaniswe ne-smartphone, unikezela ngeempawu ezinje ngezaziso zeminxeba engenayo kunye nemiyalezoukwala iifowuni, fumana ifowuni yam, ixesha lesithombe kunye nolawulo lwerimothi. Ingasetyenziswa kwimibala efana ne-Obsidian emnyama, iBlue Blue, kunye neQuicksand Gold.
IHuawei Band 3e
IHuawei Band 3e ngumgangatho okwinqanaba lokungena eza nokulandela umkhondo wokuqina komzimba kunye nezaziso ezihlakaniphile. Ixhotyiswe ngescreen esine-intshi ye-AMOLED kwaye iyamelana namanzi kwiimitha ezingama-0,5, eyenza ikhuseleke ukuyisebenzisa echibini. Isixhobo, esiza netekhnoloji yokujonga ubuthongo, sinika ubomi bebhetri yeentsuku ezili-50 "kusetyenziso oluqhelekileyo."
Ixabiso kunye nokufumaneka kwazo zombini iisongo eMelika
Zombini ezi zixhobo ziyafumaneka ukuze zithengwe kummandla waseNyakatho Melika ngeAmazon, B&H Photo Video kunye neNewegg, kwaye kungekudala ziya kubonelelwa ziinkampani ezinje ngeSekethe yeSixeko, iOfisi yedepho, iAdorama, iRakuten kunye neTiger Direct. Ngelixa IHuawei Band 3 Pro inexabiso $ 69,99, Ibhendi 3e yi- $ 29,99.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Huawei's Band 3 Pro kunye ne-3e ye-Smart Wristbands ngoku iyafumaneka e-United States
[APK] Ungayifumana njani indlela ephezulu yeShot yePixel 3 kwiGoogle Pixel 2
Iprosesa entsha yeSamsung sele inomhla wentetho